Google dia manambara ny Wear OS 2.1 miaraka amin'ny fanatsarana ny endrika sy amin'ny fitantanana fampandrenesana | Androidsis
Google dia manambara ny Wear OS 2.1 miaraka amin'ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fampandrenesana
Nandritra ny fotoana vitsivitsy, dia toa niverina avy nijery ireo tovolahy avy amin'ny Google izay tokony hananan'ny rafitra fiasan'ny orinasa ho an'ny smartwatches, rafitra miasa izay toa nilaozana nataon'ny goavambe fikarohana nandritra ny roa taona lasa.
Ny fanovana voalohany hitantsika tamin'ny anaran'ny sehatra, izay dia nantsoina hoe Android Wear to Wear OS, hetsika iray mikendry mazava tsara fa ny mpampiasa iPhone dia tsy mino fa ny maodely tantan'ity rafitra fiasa ity dia tsy mifanaraka amin'ny iOS.
Fa koa, napetrany koa ny batery ary lasa izy fanatsarana ny sasany amin'ireo fiasa efa natolony, ankoatry ny manampy vaovao. Ny hetsiky ny orinasa farany dia toa manamafy ny fahalianan'ny Google amin'ny Wear OS satria vao avy nanolotra ny fanavaozana vaovao izy, fanavaozana iray izay mifantoka amin'ny fanatsarana ny fitantanana izay ampandrenesinay.
1 Mora ny miditra amin'ny fampandrenesana
2 Google Assistant dia mavitrika kokoa
3 Fanatsarana ny Google Fit
Mora ny miditra amin'ny fampandrenesana
Raha miresaka momba ny fampandrenesana dia mora kokoa izao, satria vitantsika izany ario miaraka daholo izy rehetra. Raha te-hamaly ny iray amin'izy ireo isika dia mila tsindrio fotsiny ilay izy mba hamaly haingana. Raha te hiditra amin'ny Play Store na Hikaroka ny fitaovako aho dia tsy maintsy misosa ny efijery.
Google Assistant dia mavitrika kokoa
Ireo mpanampy dia tsy eo fotsiny hanatanteraka ireo asa amporisihanay, fa tsy maintsy atao koa fahazoan-dàlana ho anay asa iraisana isan’andro na ara-potoana. Raha hitany, ohatra, fa eo amin'ny seranam-piara-manidina izahay, dia hasehony amintsika ny toerana misy ny sidina sy ny antsipirian'ny famandrihanay trano fandraisam-bahiny.
Fanatsarana ny Google Fit
Mampiseho ny fanoloran-tenan'i Google amin'ny fahasalamana, hiditra amin'ny angona Google Fit, jereo ny toetoetran'ny tanjontsika na amin'ny fomba tsotra manomboka fampiofanana, mila swipe miankavia fotsiny isika.
Ireo fiasa vaovao telo ireo dia hanomboka hisy amin'ny volana manaraka, ary ho tonga amin'ny endrika fampandrenesana avy amin'ny terminal anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Google dia manambara ny Wear OS 2.1 miaraka amin'ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fampandrenesana
Ny fampiharana tsara indrindra hanamboarana Android
Lalao Android 5 hankafizana amin'ity faran'ny herinandro ity